Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘာလဲ..?
သမိုင်းတစ်ကွေ့ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ အကြောင်းရေးဖို့ အချက်အလက်တွေပြန်ရှာနေတုံး ရေဒီယိုမှာ၊ အင်တာနက်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်ဆိုတာတွေကြားရသည်။ အစိုးရကို ဆန့်ကျင် နေ သူများကလည်း ဘာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရကိုဆော်ဖို့အခွင့်အရေးရင် မနည်းဘူးဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဂရုဏာသက်စရာအဖိနှိပ်ခံများအဖြစ် ဘေးတီးပေးကြသည်။ ထိုလုပ်ရပ်သည် မည်မျှ အန္တရာယ်ကြီး သည်ကို ထိုသူတွေသိပါရဲ့လား။ ကျွန်တော် ၀န်ထမ်းဘ၀ တစ်လျှောက်တွင်နှစ်အတော်များများ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ နေခဲ့သဖြင့် ဒီပြဿနာကိုထိတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် သိသမျှကို ဝေမျှလိုက်ပါသည်။ ဘယ်သူမှန် ပြီးဘယ်သူမှားသည်ကိုတော့ စာဖတ်သူ လူငယ်များသာ စဉ်းစားကြပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုကြောင့် နေစရာမရှိသော ဘင်္ဂလီများသည် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခိုးဝင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိရာ ရိုဟင်ဂျာဟူသော မိုးကျရွှေကို တိုင်းရင်းသားနာမည်တခုကို ဖန်တီး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သိမ်းယူရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြသည်။ ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့သာမက စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာဘက်အခြမ်းမှနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခိုးဝင်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ခွေးသားပေါက်သလို မွေးပြီး လူ၊ ဘာသာရေး၊ မီဒီယာတို့ဖြင့် သိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားနေကြသော ခေါ်တောကုလား (၀ါ) ဘင်္ဂလီကုလားများ
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် စကားလုံးကိုလည်း ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဖဆပလ အမတ်ဖြစ်နေသည့် ကုလားများက စတင်တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်မူဆ လင်ဟု ဆိုသည်။ တကယ်တော့ ကုလားသည် ကုလား၊ ရခိုင်သည် ရခိုင်သာဖြစ်၏။ ရခိုင်လူမျိုးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သာရှိသည်။ မူဆလင်မရှိ။
ရိုဟင်ဂျာဟု ၄င်းတို့ကိုယ် ၄င်းတို့ခေါ်ဆိုနေသည့် ဘင်္ဂလီကုလားဆိုးများ
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 3:42 PM